Famerenana ny Controller FC30 Pro ho an'ny Android | Androidsis
8Bitdo dia orinasa sinoa manokana amin'ny famokarana mpanara-maso ny fomba Retro. Tamin'ny fotoana nanaovantsika ny famakafakana ny tena NES30, mpanara-maso izay manana famaranana mitovy tanteraka amin'ny mpanara-maso ofisialy ny console amin'ny birao voalohany an'i Nintendo. Ankehitriny dia anjaran'ny FC30 Pro, ny kinova vitaminaina izay miavaka amin'ny bokotra analogy roa ahafahany mankafy lalao amin'ny findainao Android. Raha faka ianao.
Ary na dia mora be aza ny mametraka FC30 Pro hilalao lalao Retro, raha te-hikirakira ny mpanara-maso ianao hiasa amin'ny lalao misy fanaraha-maso mikasika, dia mila manana fahazoan-dàlana Root amin'ny terminal anao ianao. Na dia mila mazava tsara amin'ny zavatra iray aza ianao: ny Controller FC30 Pro dia natao ho anao hankafizanao amin'ny lalao Retro tsy natao ho anao ny manapoaka lohanao amin'ny Modern Combat 5. Fa ampiasao ny mpanera hafa ary aza afangaro ny bokotra an'io firavaka io ho an'ireo tia lalao retro.
1 FC30 Pro, famolavolana mahafinaritra izay hahafaly ireo tia ny Retro
2 FC30 Pro, fifehezana kalitao ary mora amboarina
3 Milalao miaraka amin'ny mpanara-maso FC30 Pro, traikefa tena tsara
3.1 Vidio ny mpanera FC30 Pro
FC30 Pro, famolavolana mahafinaritra izay hahafaly ireo tia ny Retro
Hanomboka ity aho Fanadihadiana FC30 Pro miresaka ny famaranana. Ary amin'ity lafiny ity dia tsy afaka hidera afa-tsy ny tombotsoan'ny fitaovana natsangana tamim-pitiavana sy tamim-pitandremana izay mahatonga an'ity fanaraha-maso lavitra ity hiavaka. Hanombohana azy, ireo izay tia konsolitra taloha dia nahatsikaritra fa ny lokony dia manondro mazava tsara ny tonony izay anisan'ny fanaraha-maso voalohany ny console Japoney iray.
Mikasika ny endriny dia hitantsika fa ny FC30 Pro dia manambatra ny tsara indrindra amin'ireo konsily roa lehibe tamin'ny taona 80 sy 90, manatsara ny lesoka vitany. Hanombohana azy, hitantsika fa ny tsipika misy azy dia mitovy amin'ny an'ny fifehezana ny console desktop faharoa amin'ny lehibe N, miaraka amin'ireo zoro boribory sy ny fametrahana ny bokotra ABXY. Ary etsy ankilany, mampiasa io endrika mainty sy volondavenona io miaraka amin'ny bokotra mena amin'ny fifehezana ny console voalohany an'ny orinasa Japoney.
Ho fanampin'ny fananana endrika tena manintona ny fananganana ny FC30 Pro dia faran'izay tsara. Ny fikasihan'ilay mpanara-maso dia tena tsara, mitovy amin'ny an'ny mpanara-maso ny Super Nintendo.
FC30 Pro, fifehezana kalitao ary mora amboarina
Ny habeny dia ampy amin'ny voalohany dia sarotra ny mahazo azy raha manana tanana lehibe ianao, fa efa zatra izany ianao. Azonao atao ny milaza fa ny lavitra dia vonona ny hitondra na aiza na aiza. Mazava ho azy, ny FC30 Pro dia misy lesoka: ny fiheverana eo anoloana dia voamarika alohan'ny fikorontanana ka amin'ny fotoana maharitra dia hanana ny baiko miaraka amin'ny manaikitra hafahafa ianao, ratsy izany raha raisina.
ny bokotra napetraka tsara sy mifanaraka; Izy io dia manana levers analogie kely roa, ankoatry ny crosshead mahazatra. Etsy ankilany dia hitantsika ny bokotra fanombohana sy fisafidianana, ho fanampin'ny bokotra A, X, B, Y fanta-daza izay mampiavaka ny konsol Nintendo.
Eo amin'ny sisiny ambony no ahitantsika ny Bokotra L1 / R1 sy L2 / R2 ary koa ny seranan-tsambo microusb hampiato ny mpanara-maso. Rehefa mamaly izy, ny LED misy azy eo ambany, amin'ny firesahana mazava tsara momba ny Castelvania sy ny sabatra Crissaegrim fanta-daza miolaka amin'ny tselatra manga, mitselatra manondro ny fiampangana azy.
Ary farany, eo amin'ny sisiny ambany dia misy bokotra kely roa, hampandehanana ny mpanara-maso FC30 Pro sy bokotra famerenana izay hanompo hisafidy ny maody hifehezana arakaraka ny lalao tiantsika hilalaovana.
Hentitra ny bokotra ary mila manery ianao hampandeha azy, zavatra tiako manokana, tsy ho diso ny bokotrao ianao. Misy olona maniry bokotra malefaka fa manaraka ny rafitra mekanika an'ny fanaraha-maso taloha, ny FC30 Pro dia manatanteraka tsara ny iraka ampanaovina azy.
Ny FC30 Pro dia misy koa mpamadika tanana izay hanampy antsika hanohana ilay fitaovana ampiasainay hilalaovana, na dia tsy tiako aza ny maody ao anatiny. Ny fikapohana sy ny fanalana ny Tsy hitako izay mahasoa Ringholder mihitsy.
Na dia marina aza fa efa nisedra azy aho nandritra ny roa herinandro ary mbola miraikitra tsara ihany, dia toa tsy endrika famolavolana izany, saingy mora ny mahita fanohanana ho an'ny telefaona na takelakao.
Milalao miaraka amin'ny mpanara-maso FC30 Pro, traikefa tena tsara
Ok, efa hitantsika fa ny mpanara-maso FC30 Pro dia miorina tsara ary manana endrika mahafinaritra, saingy mety amin'ny filalaovana ve izany? Eny ny valiny. NA mifanaraka amin'ny lalao maromaro, ao anatin'izany ny Modern Combat 5, Heveriko fa ity karazana peripheral ity dia miorina mba hankafizanao ny lalao Retro ary amin'ity tranga ity ny FC30 Pro dia mihoatra noho izay antenainao.
Mifandraika amin'ny fitaovana Android rehetra Mila manetsika ny blueberry ny telefaona na takelaka fotsiny ianao ary mampifandray ilay lavitra. Tsy mora izany. Avy eo dia mila manokatra ny emulator fotsiny ianao ary manamboatra ny bokotra hahafahana manorotoro ny fahavalo amin'ny fiarovan-doha.
Nanandrana ny emulator an'ny Super Nintendo sy Nintendo aho ary ny traikefa dia nahafa-po fotsiny. Ny bokotra dia mamaly haingana mamela anao hilalao milamina. Ny traikefa amin'ity lafiny ity dia tsy tokony ho tsara kokoa.
Fa maninona no tadiaviko ny bokotra analogy raha ny lalao NES sy Super NES dia lalaovina miaraka amin'ny crosshead foana? Rahoviana izao Nanapa-kevitra ny hanandrana emulator Nintendo 64 sy Playstation tiako aho toy ny ankizy mahatadidy ny taloha.
Nampidiniko ny M64 emulator milalao lalao Nintendo 64 ary ny tsy nampoizina voalohany voalohany dia hitako rehefa ilay FC30 Pro dia namboarina ho azy ho an'ity emulator ity. Ny olana amin'ny lalao Nintendo 64 dia ny Nintendo hafahafa mifehy, miaraka amin'ireo bokotra efatra miendrika hazo fijaliana, ankoatry ny bokotra A, B.
Amin'ity tranga ity, FC30 Pro dia manamboatra ny bokotra analog tsara raha hiasa ho toy ny bokotra miendrika lakroa, mamela a traikefa mpampiasa tonga lafatra. Ny fahafinaretana ny lalao Nintendo 64 tsara indrindra miaraka amin'ny FC30 Pro dia tena nahafaly.
ihany koa raha ROOT ianao dia azonao atao ny manamboatra ny mpanara-maso hahafantarana ireo bokotra mikasika eo amin'ny efijery amin'ny lalao rehetra, lafin-javatra iray hafa tokony hodinihina. Te hanana bebe kokoa ve ianao? Ny mpanara-maso FC30 Pro dia mifanaraka amin'ny Android, iOS, PC, Wii ary Wii U. Eny, afaka milalao amin'ny solosainao ianao na amin'ny Wii na Wii U console anao miaraka amin'ny mpanara-maso 8Bitdo vaovao. Oh, ary mamela mpilalao efatra hilalao amin'ny fotoana iray ihany! Mpandrindra ARM voatahy ...
Farany, mariho fa efa nilalao nandritra ny adiny 3 mahery aho nefa tsy voatery niantoka ny mpanera, noho izany ny fizakantenan'ny FC30 Pro dia mihoatra ny ampy.
Raha fintinina, ny FC30 Pro dia tena mpanara-maso ary miasa tsara. Ary raha jerena fa ny mpaninjara ofisialin'ity fitaovana ity, ny Fivarotana an-tserasera Chollomedia, misy amin'ny vidiny tena manintona ve izy io, 37,50 euros, Heveriko fa fividianana mihoatra ny antonony mba hankafizana ireo lalao tianao indrindra.
Vidio ny mpanera FC30 Pro
Famoronana mahafinaritra sy mahomby
Famaranana avo lenta ary valiny fanaraha-maso tena marina
Mora tokoa ny mampifanaraka amin'ny fitaovana Android
Tsy azo ampiasaina intsony ny sary eo alohany
Tsy dia ilaina loatra ny tompon'andraikitra amin'ny peratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » FC30 Pro, mamakafaka ilay lavitra vaovao izahay ho an'ireo tia ny Retro
Manontany i Pepe dia hoy izy:
Ahoana ny fotoana iainan'ny batterie, rehefa simba izy satria sinoa, mora ve ny mahazo ny solony?
Valio ny fanontaniana Pepe
Tonga any Espana ihany ny Facebook Lite amin'ny farany mba hamonjy anao megabytes vitsivitsy amin'ny drafitry ny angon-drakitrao
OnePlus 2 dia hampiditra ny taranaka faharoa an'ny Snapdragon 810